Inés del Alma Mía: Mutero waAllende kuhupenyu hwaInés Suárez | Zvazvino Zvinyorwa
Ines yemweya wangu inhoroondo yenhoroondo nemunyori ane mukurumbira Isabel Allende. Rakaburitswa muna 2006, zano racho rinorondedzera zvakaitika kune akashinga neSpanish mukundi Inés Suárez nebasa rake rinotungamira mukuzvimirira kweChile. Iyo inyaya yechokwadi inotaurira zviitiko, kurasikirwa uye kunetsekana kwevazhinji vanofarira nyika muLatin America, kunyanya mukutorwa kweChile neSpanish.
Allende akaita kuferefetwa kuzere kwezviitiko zvakaitika kuitira kuti basa rive rakavimbika sezvinobvira.. Pamusoro pekuremekedzwa kunozivikanwa kunopihwa Inés Suárez, bhuku iri rinoratidzira zvakaitika nezvakaitika zvevamwe vanokosha, vakadai sa: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia naRodrigo de Quiroga. Muna 2020, iyo isingazivikanwe yakateedzana kunoverengeka yakaburitswa naPrime Video, iyo yaigadzirwa neRTVE, Boomerang TV uye Chilevisión.
1 Pfupiso ye Inés del alma mía
1.1 Kutanga kwenyaya
1.3 Kutanga muAmerica (1537-1540)
1.4 Rwendo rweChile (1540-1541) uye kuvambwa kweSantiago de Extremadura (1541-1543)
1.5 Kurwiswa kuSantiago
1.6 Makore akaomarara (1543-1549)
1.7 Makore apfuura
2 Nezve munyori, Isabel Allende
2.1 Isabel Allende mabhuku
Pfupiso ye Ines yemweya wangu
Pazera ramakore 70, Inés Suárez —Anonziwo Inés de Suárez— anotanga kunyora nhoroondo dzehupenyu hwake. Chinangwa chekunyora iyi diary ndeyekuti mwanasikana wake wekurera Isabel averenge uye kuti nhaka yake isakanganwe. Uye zvakare, chembere inotarisira kuti rimwe zuva ichakudzwa nechiyeuchidzo chezviito zvayo.
Agnes akaberekerwa muPlasencia (Extremadura, Spain), mumhuri yakaderera. Kubva pamakore masere, kugona kwake kusona nekushongedza zvakamubatsira kutsigira mhuri yake. Pakati pevhiki dzvene akasangana naJuan de Málaga, kwaakange akwezva kubva panguva yekutanga. Kwemakore anopfuura matatu vaive nehukama hunodakadza. Gare gare ivo vakaroora uye vakatama kuMalaga.
Mushure memakore maviri vasina kukwanisa kubata pamuviri, imba yavo yakashanduka kuvengana. Juan akasarudza kutevera zviroto zvake ndokuenda kuNyika Itsva, akadzokera kuPlasencia, kwaakagamuchira mamwe mashoko nezvake kubva kuVenezuela. Mushure mekumirira kwenguva refu, Inés akawana mvumo yehumambo yekuonanazve nemurume wake. Akatanga America achimutsvaga uye kuzvimirira kwaaishuvira kwazvo.
Ines yemweya wangu ...
Kutanga muAmerica (1537-1540)
Pashure penzendo dzinoverengeka, Inés akasvika pachiteshi cheCallao muPeru, nenguva isipi akaenda nemafriars kuGuta reMadzimambo (ikozvino Lima). Ikoko akabvunza nezvemurume wake, uye pakupedzisira yakawanikwa Musoja ndiani aimuziva, uyu akamuudza kuti Juan akafa muhondo yeLas Salinas. Kubva ipapo, Inés akafunga kuenda kuCuzco kunotsvaga mhinduro kune izvo zvisingazivikanwe nezvemurume wake mushakabvu izvozvi.
Shoko rakakurumidza kupararira kuti shirikadzi yakanga iri munyika idzodzo, nekuda kweichi chikonzero, Gavhuna weMarquis Francisco Pizarro aida kusangana naye. Mushure mekubvunzurudza Inés -iye akatsigira kuti aisada kudzokera kuSpain-, regent akamupa imba yekugara. Kamwe yaiswa ipapo, Inés akasangana naPedro de Valdivia, waaive nehukama naye pakutanga kumuona, kubva panguva iyoyo zvese zvakaparadzaniswa.
Valdivia aida kusunungura Chile, sekuyedza kwakaita Diego de Almagro; kana uchipindura ku Agnes, iye Akataura kuti aizoenda naye. Vakaenda vese kuGuta reMadzimambo kunokumbira mvumo kubva kuna Pizarro, uyo, mushure menguva yekutaurirana, akatambira chikumbiro. A) Ehe, vese vari vaviri vakatanga kushamisika nenzira yemurenje, achiperekedzwa naJuan Gómez, Don Benito, Lucía, Catalina nemasoja akati wandei.
Rwendo rweChile (1540-1541) uye kuvambwa kweSantiago de Extremadura (1541-1543)
Zverwendo ivo vakashandisa mepu yakadhonzwa naGeorge de Almagro, uyo aive akaisika kuti igone kutungamira kudzoka kwake. Mushure memwedzi mukaravhani, vakadzika musasa kwemavhiki muTarapacá vakamirira kusimbiswa. Pavaive varasikirwa netariro, boka revarume rakatungamirwa naRodrigo de Quiroga pamwe nevatungamiriri vakaita saAlonso de Monroy naFrancisco de Villagra vakasvika.
Vhiki mbiri gare gare, vakatanga basa rakaoma kuburikidza nemurenje. Valdivia, Inés, varume vavo nemaYanaconas vakakwanisa kusvika kunyika dzeChilean mumwedzi mishanu. Muna Kukadzi 1541, uye mushure mekukunda kurwisa kwakawanda kwevavengi, Pedro de Valdivia akafunga kutanga guta reSantiago de la Nueva Extremadura. Nyika dzakagoverwa uye mumwedzi mishoma nzvimbo yacho yaive yakabudirira kune wese munhu.
MunaSeptember 1541, apo Valdivia aive kunze kweSantiago, Inés akayambira Quiroga, nekuti mhomho yevanhu yaiuya kwavari. Saka kwakatanga kurwira kukuru kwekudzivirira ndimaIvo vakakwanisa kutonga mamiriro acho, kunyangwe guta rakanga rave matongo, nevakawanda vakafa uye vakakuvara. Inés aive nemutambo unoshamisa mukurwa, akarwa pamwe nevarume kusvika kumagumo.
Valdivia akazosvika kwapera mazuva mana; Kunyangwe akasuruvara, akavakurudzira kuti vatange patsva, vachidanidzira: "Santiago uye vhara Spain!"
Makore akaomarara (1543-1549)
Mushure mekunge Santiago aputswa, vese vaida kudzokera kuPeru, asi Valdivia haana kuvatendera. Panzvimbo iyoyo, akabvunza Cuzco kwekusimbiswa kwekuvakazve guta; apo izvo zvaiitika, vakararama makore maviri ekutambudzika kwakadzama. Kana kutaurirana nenyika yeInca kwawanikwa, vakatumira zvekushandisa uye zvese zvakatanga kuvandudzika, saka Santiago yakaziviswa guta guru rehumambo.
Valdivia Ndakanga ndisina kugadzikana, zvakanaka aida kusunungura mamwe matunhu muChile -Ivo vaitongwa navaMapuches- uye vanopindira muzviitiko zvePeru. Pasina nguva, akasimuka nevamwe vatungamiriri, chimwe chinhu chaisada chero vateveri vake, vaitarisira Villagra. Mushure mekuenda kwemurume uyuInés akanzwa anyengedzwa uye nekufamba kwenguva akapotera mumaoko aQuiroga.
Uye 1549, mauto maviri anobva kuLa Serena -Guta richangobva kuvakwa--vakasvika muSantiago nenhau dzekuti vakanga varwiswa nemaIndia. Kumukira kwaizokurumidza kuvabata, nekuda kweichi chikonzero kutya kwakapinda pakati pevaigara. Kwakatemwa kuti Villagra yaizoenderera mberi kugadzirisa mamiriro ezvinhu, iye akawana chibvumirano cherunyararo, asi zvaive zvisina kugadzikana, munhu wese aida kuti gavhuna adzoke.
Mushure memwedzi yakati wandei yekurwa, Valdivia akakwanisa kubva kuPeru, asi akakurumidza kudaidzwa naViceroy La Garza. Pedro aifanira kupomerwa mhosva dzakawanda, saka akadzoka kuzotongwa. Kunyangwe murume uyu airatidza kusava nemhosva, mutongo wacho wakakumbira kuti Inés atorerwe hupfumi uye adzokere kuPeru kana Spain.
Inés akaramba kusiya Chilesaka akafunga kuroora Rodrigo de Quiroga, nekuti neiyi nzira aisazorasikirwa nepfuma yake, uye haaizofanira kuenda. Akapika rudo rusingaperi uye kuvimbika kumurume uyu, uyo nguva yakati yapfuura akachengeta mwanasikana wake Isabel. Ivo vaviri vakagara pamwe kwenguva yakareba - Kusvikira vafa - uye vakarwa navaMapuches mukurwisa kwavo kwekutanga.
Nezve munyori, Isabel Allende
Munyori Isabel Angelica Allende Llona akaberekwa musi waAugust 2, 1942 muLima, Peru. Vabereki vake vaive Tomás Allende Pesce naFrancisca Llona Barros; mushure mekurambana kwavo muna 1945, Isabel akafamba naamai vake nevanin'ina vake kuenda kuChile, kwaakagara kwemakore akati wandei.
Mushure memubatanidzwa muChile muna 1973, Allende aifanirwa kuenda kuutapwa kuVenezuela nemurume wake nevana (kubva muna1975 kusvika 1988). Muna 1982, akaburitsa bhuku rake rekutanga: Imba Yemweya; Nekuda kweiri basa, akawana hukuru hukuru pasi rose. Parizvino, munyori ane mukurumbira akaburitsa anopfuura makumi maviri emabhuku, ayo akakunda nawo vanopfuura mamirioni makumi manomwe nemashanu evaravi pasi rese.
Zvimwe zvezvisikwa zvake zvakatanhamara ndezvi: Zano risingaperi (1991), Paula (1994), Guta remhuka (2002), El Zorro: iyo ngano inotanga, Inés del alma mía (2006), Bhuku raMaya (2011), Mudiwa weJapan (2015); uye yake yekupedzisira posvo: Vakadzi vemweya wangu (2020).
Isabel Allende mabhuku
Mukadzi akakora wevhu (1984)
ZveRudo neMimvuri (1984)
Zano risingaperi (1991)
Mwanasikana wepfuma (1998)
Portrait mu sepia (2000)
Guta remhuka (2002)
Nyika yangu yakaumbwa (2003)
Humambo hweshato yegoridhe (2003)
Sango revaPygmy (2004)
El Zorro: iyo ngano inotanga (2005)
Huwandu hwemazuva (2007)
Vanoda Guggenheim. Basa rekuverenga (2007)
Bhuku raMaya (2011)
Mutambo weRipper (2014)
Kupfuura chando (2017)
Yakareba yegungwa petal (2019)
Vakadzi vemweya wangu (2020)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Ines yemweya wangu